Nendiro - China Shandong Huaxin Electric Furnace
Tiri kupa mhuka-siyana nendiro vachikwanisa chaizvo kubva 0.3ton kuti 90ton, isuwo kugadzira yendiro kwakavakirwa yeGmail.END_STRONG kuti zvinodiwa. 1.Product Description foundry yendiro All inogona yakanyatsoiswa aine injini giya ungano Powered kutenderera. The kutenderera aimhanya inogona kuchinja zvinodiwa vatengi vake. Kushandisa Kukanda foundry nendiro Hot simbi nendiro kuti foundry Kudzingwa oparesheni, pashure ririkuitwa simbi mvura pamberi mevira, ugozvitumira kutsinga wokuenzanisira nzvimbo kudira kubudikidza ddau ...
Tiri kupa mhuka-siyana nendiro vachikwanisa chaizvo kubva 0.3ton kuti 90ton, isuwo kugadzira yendiro kwakavakirwa yeGmail.END_STRONG kuti zvinodiwa.
foundry yendiro All inogona yakanyatsoiswa aine injini giya ungano Powered kutenderera. The kutenderera aimhanya inogona kuchinja zvinodiwa vatengi vake.
Kushandisa Kukanda foundry nendiro
Hot simbi nendiro kuti foundry Kudzingwa oparesheni, pashure ririkuitwa simbi mvura pamberi mevira, ugozvitumira kutsinga wokuenzanisira nzvimbo kudira nokudzinga motokari.
Nendiro nokuti steelmaking chirimwa, foundry pachena pachoto chamatare, choto kana graphs yakanyungudutswa simbi, vachikanda kushanda pamberi basa.
The yakaumbwa yendiro simbi dziri rakakamurwa turbine maviri-nzira yedzimudzangara muhombe uye yakarurama giya yedzimudzangara kuzvidzora nokukiya mhando nemhando mbiri (1:72, 1 reshiyo: 75) isu takanzwa pamurayiro chikuru zvinhu vari: muhombe centre zvakagadzirwa anonzwisisa, vaviri-nzira reversible zvakanaka, inokosha reset.Turbine zviviri-nzira yedzimudzangara mhando muhombe adopts maviri-nzira turbine mutevedzeri yedzimudzangara, wakatsetseka hutachiwana, yakakunakira kuvhiyiwa, mbiri-nzira yakanaka consistency.Straight kubva zvechizarira giya yedzimudzangara mugodhi adopts mukuru mhando, kaviri siyana kudzora kukweshera, yokuzviratidza nokukiya waivako yakasimba, lightweight pachena, unogona kukandwa ne zvokunze simba zvishoma, kudzoka nokukurumidza, regai kowtow, kushandisa vakachengeteka uye hwakavimbika.
2. Chichiitwa vachikanda simbi nendiro
1) .Reasonable kusarudza kutenderera centre, yakakunakira kuvhiyiwa, kunogona vabve vanzwa kana kudira zvapera.
2) .Adopt kaviri honye vhiri peya transmission.Although kugadzira kudiwa zvakakwirira, asi kuchinja hutachiwana, mbiri-nzira reversible.
3) .Enclosure chakagadzirwa mukobvu esimbi ndiro, pasi mubhegi mamiriro kuburikidza pokushandisa wemishonga taper, pasi pomukombero, Welding inishuwarenzi katatu, izvo akawedzera upenyu basa, uye nechokwadi kuchengeteka opareta.
Uchitikurudzira Dimensions (mm)
Previous: furnace changed chinja